Kabtan Ramos Muxuu Ka Yiri Sida Uu U Arko In Real Ay Uga Ciyaaryahano Badato Barca Xulka Spain %
Kabtan Ramos Muxuu Ka Yiri Sida Uu U Arko In Real Ay Uga Ciyaaryahano Badato Barca Xulka Spain
Liiska ciyaartoyda xulka qaranka Spain ee dhawaan lasoo saaray, kuwaasoo gaaraya 25, islamarkaana dheelaya kulamada saaxibtinimo oo ay la kala balansan yihiin Argentina iyo Germany ayaa waxaa xidigaha ugu badan ku leh Real Madrid.
Los Blancos, ayaa waxaa hada xulka ay ku leedahay Lix ciyaaryahano halka Barca ay ku leedahay kaliya Saddex ciyaaryahano, taasoo ka dhigan inay tahay mid isbedal uu ku yimid, maadaama ay horey ugu badneed Bluagrana.
Tani ayaa waxay sidoo kale ay ku macneeyeen kuwa nuqdeeya arrimaha cayaaraha in soo saarista ciyaaryahano Spanish, ay ku yaaraatay masraxa Barcelona, halka Los Blancos aad moodo inay diiradda saartay arrintaas.
Sikastaba, Ramos oo sheekadaas si gooni ah wax looga weydiiyay ka hor kulanka ay la balansanaayeen Germany. ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay tani ay uwanaagsan kubada Spain, inkastoo uu sheegay in aysan wax isbedal ahayn keeneen.
“Hadda Real Madrid waxay ka badan tahay Barcelona,” ayuu ku jawaabay mar la weydiiyay sida uu u arko in ciyaartoyda Spain ay noqdaan kuwa tirada ugu badan laga soo xulay Real Madrid, marka loo eego iyaga iyo Barcelona.
“Laakiin tani wax isbedal ah kuma keeneyso kooxdeena qaranka, waxayna ka dhigeysaa mar walba mid isku dheela tiran,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Tani waa mid ufiican kubada cagta Spain,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, kabtanka xulka qaranka kubada cagta Spain iyo waliba naadiga Real Madrid, wiilka ay geesiga ku tilmaamaan Jamaahiirta Los Blancos, ee Sergio Ramos.
Wax ka ogoow dhacdooyinkii laga bartay Horyaalka soomaaliya wareegga koowaad